Houseparty ဆိုတာဘာလဲ - VidaBytes | LifeBytes
Iris Gamen | 03/05/2022 20:00 | applications များ
မကြာသေးမီအချိန်များအတွင်း ဒေါင်းလုဒ်အများဆုံးအက်ပ်များထဲမှတစ်ခုမှာ Houseparty ဖြစ်သည်၊ အထူးသဖြင့် လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်က ကျွန်ုပ်တို့ကြုံတွေ့ခဲ့ရသော နာမည်ကျော်ကပ်ရောဂါ၏ပထမလများအတွင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် လူထောင်ပေါင်းများစွာ အသုံးပြုခဲ့သည့် အက်ပလီကေးရှင်းအကြောင်း ပြောနေသော်လည်း၊ Houseparty သည် မည်သည့်အရာနှင့် အသုံးပြုရမည်ကို လူတိုင်းမသိကြပါ။
ကျော်ကြားသော ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုဝန်ဆောင်မှုကို 2016 ခုနှစ်တွင် စတင်အသုံးပြုခဲ့သော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့ပြောခဲ့သည့်အတိုင်း လွန်ခဲ့သည့်နှစ်အနည်းငယ်အထိ ၎င်းသည် အရှိန်အဟုန်ဖြင့် မအောင်မြင်ခဲ့ပါ။ သင်ရှာနေသည့်အရာသည် သင့်သူငယ်ချင်းများ သို့မဟုတ် မိသားစုကြားတွင် ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများ ပြုလုပ်မည်ဆိုပါက ၎င်းသည် ပြီးပြည့်စုံသော application တစ်ခုဖြစ်သည်။.
Houseparty ရဲ့ ယေဘုယျအားဖြင့် ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကို သိချင်ရင် အကောင်းဆုံးကတော့ မင်းနေပြီးတော့ ဒီစာစောင်မှာ မင်းကိုပြောမယ့်အရာအားလုံးကို ကြည့်ပါ။ ဖုန်းခေါ်ဆို၍ဖြစ်စေ၊ မက်ဆေ့ချ်ဖြင့်ဖြစ်စေ ဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်ရန် အခြေခံလုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုပါရှိသည်။ဒါကြောင့် ခဏနေ၊ ကြည့်ပါ။
1 HouseParty ဆိုတာဘာလဲ။
2 Houseparty ကို ဘယ်မှာသုံးလို့ရမလဲ။
3 Houseparty ကို စတင်ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။
4 Houseparty နဲ့ စတယ်။
5 ပထမဆုံး ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှု
သင်ဟာ ကပ်ရောဂါတစ်ခု ကြုံတွေ့ရတဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သင်ချစ်ရတဲ့သူတွေနဲ့ ဝေးကွာနေတဲ့အခါ အဆက်အသွယ်ထိန်းသိမ်းဖို့ အလွန်ခက်ခဲပါတယ်။ သို့သော် ၎င်းအတွက်၊ ဖန်သားပြင်များမှတစ်ဆင့် အဆက်အသွယ်ကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရန်အတွက် Houseparty ကဲ့သို့သော ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုအက်ပ်များရှိသည်။
၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အား အကွာအဝေးကို တိုတိုနှင့် အသံဖြင့်ဖြစ်စေ၊ မက်ဆေ့ချ်ဖြင့်ဖြစ်စေ အမြင်အားဖြင့်ဖြစ်စေ ဆက်သွယ်နိုင်စေပါသည်။. ၎င်းသည် လည်ပတ်မှုစနစ် အမျိုးအစားအားလုံးအတွက် ဘက်စုံသုံး အပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် လူရှစ်ဦးအထိ အုပ်စုလိုက် ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများ ပြုလုပ်နိုင်သည့်အပြင် မက်ဆေ့ချ်ဝန်ဆောင်မှုနှင့် အခြားလုပ်ဆောင်ချက်များကိုလည်း ပြုလုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
၎င်းကို မျက်နှာချင်းဆိုင် လူမှုကွန်ရက်အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး အသုံးပြုရ အလွန်လွယ်ကူသည်။ အရင်ကပြောခဲ့တဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေအပြင်၊ Houseparty သည် သင့်အား ကျွန်ုပ်တို့ဖန်တီးထားသော လူအုပ်စုနှင့် စကားပြောဆိုနိုင်စေပါသည်။. ဤချတ်တွင် သင်သည် ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအတွင်း စာသားမက်ဆေ့ချ်များသာမက GIFS၊ emojis များကိုလည်း ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
ဤလျှောက်လွှာ၏ တော်လှန်ရေးသွင်ပြင်လက္ခဏာများ၊ အသံ သို့မဟုတ် ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုအတွင်း၌ပင် သင်သည် အခြားသူများနှင့် မတူညီသောဂိမ်းများကို ကစားနိုင်သည်။. ကျွန်ုပ်တို့ပြောနေသော ဤဂိမ်းများသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ၀တွင် တစ်ချိန်ချိန်တွင် ကစားဖူးသည့် ဂန္တဝင်ဂိမ်းများဖြစ်သည့် Pictionary၊ Trivial၊ Who's Who စသည်တို့ဖြစ်သည်။
Houseparty ကို ဘယ်မှာသုံးလို့ရမလဲ။
ဤအပလီကေးရှင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပထမဆုံး ထောက်ပြလိုသည်မှာ ၎င်းသည် ဖြစ်၏။e သည် အခြားသော ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုအက်ပ်လီကေးရှင်းများကဲ့သို့ အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။. အခြားကိစ္စများတွင်ကဲ့သို့ပင်၊ ဝယ်ယူမှုဖြင့်ပြုလုပ်သော အချို့သောရှုထောင့်များရှိသော်လည်း ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ခြင်းနှင့် ပါဝင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်နှစ်ခုစလုံးသည် အခမဲ့ဖြစ်သည်။
Houseparty သည် multiplatform application ဖြစ်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ၊ ၎င်းသည် မတူညီသောလည်ပတ်မှုစနစ်များတွင် ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေနိုင်မည့် အက်ပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
အပြုသဘောဆောင်တဲ့အချက်ကတော့ အဲဒါပါပဲ။ အကောင့်တစ်ခု၊ ပရိုဖိုင်တစ်ခုဖန်တီးပါက ပြဿနာမရှိဘဲ ဗားရှင်းအားလုံးတွင် ဖွင့်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။. ၎င်းကို သင့်စက်ပစ္စည်းများတွင် ထည့်သွင်းနိုင်ပြီး ဖွင့်နိုင်သည်။ ၎င်းသည် Android၊ ios၊ Ipad၊ Windows၊ Linux နှင့် Mac စက်များနှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သည်။
အပလီကေးရှင်းသည် သင့်ဖုန်း၊ တက်ဘလက် သို့မဟုတ် ကွန်ပြူတာမှ ၎င်းကို run သည့်အခါ ပြဿနာများကို ပေးမည်မဟုတ်ပါ။ Houseparty ဗားရှင်းအားလုံးတွင် ဝန်ဆောင်မှုများကို ရနိုင်သောကြောင့် သင်သည် အပြစ်ကင်းစင်စွာ ဆက်သွယ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။. ဥပမာအားဖြင့်၊ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က သူ့ဖုန်းကနေ သင့်ကိုဖုန်းခေါ်ရင် Error အမျိုးအစားမရှိဘဲ သင့်ကွန်ပြူတာကနေ သူနဲ့ ဆက်သွယ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
Houseparty ကို စတင်ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။
လည်ပတ်မှုစနစ် အမျိုးအစားအားလုံးနှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အက်ပလီကေးရှင်းဖြစ်သောကြောင့် ၎င်းကို ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲခြင်းနှင့် ထည့်သွင်းခြင်းတွင် မည်သည့်ပြဿနာမျှ ရှိမည်မဟုတ်ပါ။
ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှု အပလီကေးရှင်းကို တရားဝင်စတိုးများတွင် မရရှိနိုင်တော့ပါ။ထို့ကြောင့် သင်သည် သင်၏ Play Store သို့မဟုတ် အခြားတရားဝင်စတိုးသို့သွားပြီး အက်ပ်လီကေးရှင်းကို ရှာဖွေပါက ၎င်းသည် ပေါ်လာမည်မဟုတ်ပါ။ Android လည်ပတ်မှုစနစ်တွင်ရော အခြားများတွင်ပါ Houseparty ကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန် အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုကို သင်ရှာဖွေရပါမည်။
အခြားစတိုးဆိုင်များစွာသည် ဤအက်ပ်ကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန် ကမ်းလှမ်းသည်။သို့သော် ၎င်းတို့အားလုံးသည် ယုံကြည်စိတ်ချရသူများမဟုတ်ပါ၊ ၎င်းတို့ထဲမှတစ်ခုသည် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသိသော ဝဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုဖြစ်သည့် softonic ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ၎င်းသည် နေရာအလွန်နည်းပါးပြီး ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲသည့်လုပ်ငန်းစဉ်တွင် အလွန်မြန်ဆန်သော application တစ်ခုဖြစ်သည်။
အကယ်၍ သင်သည် ယုံကြည်စိတ်ချရသော စာမျက်နှာတစ်ခုတွင် လျှောက်လွှာကို တစ်စုံတစ်ခုသော အခွင့်အခါမျိုးဖြင့် ရှာမတွေ့ပါက၊ သင့်အား ယုံကြည်ရသော IT ပုဂ္ဂိုလ်ထံ ချဉ်းကပ်ပြီး ရှာဖွေရာတွင် ကူညီရန် သင့်အား အကြံပြုအပ်ပါသည်။
Houseparty နဲ့ စတယ်။
သတင်းအရင်းအမြစ်- alamy – houseparty
တပ်ဆင်ခြင်းသည် မြန်ဆန်သည်၊ သင်သည် ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ထားသော ဖိုင်ကိုဖွင့်ပြီး တောင်းဆိုထားသော ခွင့်ပြုချက်များကို လက်ခံရန်သာလိုသည်။ လျှောက်လွှာကို install လုပ်ဖို့။
သင်ထည့်သွင်းပြီးပါက Houseparty ဖြင့် စတင်ရန်၊ သင်သည် ပလပ်ဖောင်းပေါ်တွင် မဖြစ်မနေ မှတ်ပုံတင်ရမည့် အကျဉ်းချုပ်ကို ဖြည့်စွက်ရပါမည်။. အမည်၊ မျိုးရိုးအမည်နှင့် အီးမေးလ်ကဲ့သို့သော အခြေခံအချက်အလက်များကို ပေးဆောင်ရန် အရေးကြီးပါသည်။
သင့်ပရိုဖိုင်အတွက် သင်အသုံးပြုသည့် အတိုကောက်သည် လုံခြုံစိတ်ချရမှုမြင့်မားသည့် စကားဝှက်ကို ဖန်တီးပေးသည့်အပြင် မှတ်သားရလွယ်ကူစေရပါမည်။. သင်စာရင်းသွင်းပြီးသည်နှင့်၊ အပလီကေးရှင်းသည် ၎င်းတို့ကို ပလပ်ဖောင်းသို့ထည့်ရန်အတွက် သင့်မိုဘိုင်းရှိ အဆက်အသွယ်စာရင်းကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရန် ခွင့်ပြုချက်တောင်းမည်ဖြစ်သည်။
အပြုသဘောဆောင်တဲ့အရာတစ်ခုပါပဲ။ ဤအပလီကေးရှင်းကိုမည်သူအသုံးပြုသည်ကိုသိရန် သင့် Facebook အကောင့်ကို Houseparty နှင့် ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။ သင့်မိုဘိုင်းအဆက်အသွယ်များမှလွဲ၍
သင်သည် အပလီကေးရှင်းသို့ သင်အလိုရှိသော အဆက်အသွယ်များကိုသာ ထည့်ရပါမည်။၎င်းတို့အားလုံးကို သင်မလိုချင်ပါက သို့မဟုတ် ၎င်းတို့အားလုံးကို တစ်ပြိုင်နက်ရွေးချယ်ခြင်းဖြင့် သင်တစ်ဦးချင်းစီညွှန်ခြင်းဖြင့် ၎င်းကို သင်ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
နောက်ဆုံးတွင် သင်သည် ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများ ပြုလုပ်တော့မည်ဆိုပါက ကင်မရာနှင့် မိုက်ခရိုဖုန်းကို ခွင့်ပြုချက်ပေးရန် သဘောတူရပါမည်။
ဤအရာများသည် ဆက်သွယ်ရေး အပလီကေးရှင်းများအားလုံး ၎င်းတို့၏ ပလပ်ဖောင်းများကို ထည့်သွင်းပြီး လော့ဂ်အင်လုပ်သည့်အခါ တောင်းဆိုသည့် အခြေခံအဆင့်များဖြစ်သည်။ Houseparty အင်တာဖေ့စ်သည် အလွန်ရိုးရှင်းပြီး ၎င်းကို အလွယ်တကူကိုင်တွယ်နိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်း သင်တွေ့ရှိရမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဤအပလီကေးရှင်း၏အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်များထဲမှတစ်ခုမှာ ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများပြုလုပ်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ Houseparty တွင် ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုပြုလုပ်နည်းကို သိရန်၊ အောက်ပါအဆင့်များကို လိုက်နာရပါမည်။ ငါတို့ မင်းကို ဘာပြောမလဲ။
ပထမနှင့် အထင်ရှားဆုံးမှာ သင်၏စက်တွင် app ကိုဖွင့်ပါ. နောက်တစ်ဆင့်ကတော့ သင်လုပ်ရမယ်။ ရွေးချယ်စရာများပါရှိသော မီနူးကိုပြသရန် စခရင်ကို အောက်ခြေမှအပေါ်သို့ လျှောချပါ။ လျှောက်လွှာ။
သင့်စာရင်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည့် အဆက်အသွယ်များကို အွန်လိုင်းတွင် ရှိနေသည်ဖြစ်စေ မရှိသည်ကို သင်မြင်နိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့် သင်နှင့်အတူ ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှု ပြုလုပ်လိုသော ပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်များသည် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု ရှိ၊ မရှိ သိရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ စကားဝိုင်းကို စတင်လိုသော အဆက်အသွယ်ရှိ Join option ကို နှိပ်ရပါမည်။
သင်တွေ့မြင်ရသည့်အတိုင်း ၎င်းသည် သင့်ခေါ်ဆိုမှုကို လက်ခံပါက သင်နှစ်ဦးစလုံးသည် ယခုအချိန်တွင် အချင်းချင်း မြင်နိုင်ကြားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ဖြစ်ဖြစ်၊ အခြားအဆက်အသွယ်များကိုထည့်လိုပါက၊ ၎င်းကိုပိတ်ထားပါက ၎င်းတို့ကိုထည့်၍မရပါက အခန်းကိုဖွင့်ရပါမည်။
Houseparty သည် သင့်ချစ်ရသူများနှင့် အဆက်အသွယ်မပြတ်စေရန် ကူညီပေးရုံသာမက စကားစမြည်ပြောနေစဉ်တွင် မတူညီသောဂိမ်းများကို ဆော့ကစားနိုင်စေမည့် မတူညီသောလုပ်ဆောင်ချက်များပါရှိသော အက်ပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ကိုင်တွယ်ရလွယ်ကူသောကြောင့် အရည်အသွေးကောင်းမွန်ပြီး သုံးစွဲသူအမျိုးအစားအားလုံးအတွက် ပလပ်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် မည်သည့်စက်ပစ္စည်းနှင့် လည်ပတ်မှုစနစ်တွင်မဆို မှန်ကန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်သော သင့်ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများတွင် အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးကို ပေးဆောင်ပါသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - LifeBytes » applications များ » အဲဒါက ဘာနဲ့ Houseparty ကို ဘယ်လိုသုံးလဲ။
Twitch တွင် တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနည်း